कृषिका हाकिमको झगडाले किसानहरू मर्कामा
प्रस, वीरगंज, १३ मङ्सिर/ रासायनिक मल बिक्री वितरणको विषयलाई लिएर कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र जिल्ला कृषि विकास कार्यालय पर्साबीच अहिले जुहारी सुरु भएपछि किसानहरू मर्कामा परेका छन् । विगत लामो समयदेखि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले आफैं रासायनिक मलको बिक्री वितरण गर्दै आएकोमा यसवर्षदेखि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमार्फत् किसानहरूलाई वितरण गर्दा विवाद भएको हो। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले रासायनिक मल बिक्री वितरण प्रक्रियामा अनियमितता गरेको भन्दै यसपालिदेखि जिल्ला मल आपूर्ति समिति पर्साले कृषि विकास कार्यालयलाई जिम्मा लगाएको हो। मल आपूर्ति समितिले किसानहरूलाई सहज र सुलभ तरिकाले मल उपलब्ध गराउने उद्देश्यले गाविसहरूमा रहेका सहकारी संस्था वा अन्य सङ्घसंस्थामार्फत् वितरण गर्ने तथा कुनै गाविसमा बढी सङ्घसंस्था भए आलोपालो गरी वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ। तर कृषि विकास कार्यालय पर्साले पठाएको पत्रलाई कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले विभिन्न झमेला खडा गरी मल दिएको छैन। धेरै गाविसहरूमा सहकारी संस्था नभएकोले सामाजिक संस्थाको नाउँमा मल दिन सिफारिस गरिएको हो। तर सिफारिसलाई कृषि सामग्री कम
जिविसको समीक्षा गोष्ठीमा सञ्चारकर्मी यादवमाथि हातपात
राजनीतिक दलहरूद्वारा गोष्ठी बहिष्कार बारा, १३ मङ्सिर/ जिविस बाराले मङगलवार आयोजना गरेको समीक्षा गोष्ठीमा समाचार सङकलन गर्न गएका प्रतीक दैनिकका बारा संवाददातालाई उपेन्द्र यादवलाई कार्यक्रममा इन्जिनियर मेघु जयसवालले हातपात गरेका छन्। दलको निर्णयविपरीत गुपचुप तरिकाले गर्न लागिएको समीक्षा गोष्ठीमा यादव पुग्दा इन्जिनियर जयसवालले आफूविरुद्ध समाचार लेखेको निहुँमा भाडाका गुण्डाहरू लगाएर स्वयं हातपात गरेका थिए। इन्जिनियर मेघु जयसवालको गुण्डागर्दी देखेर समीक्षा गोष्ठीमा गएका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले कार्यक्रम नै बहिष्कार गरी निस्केका थिए । कार्यक्रम बहिष्कार गर्नेमा एकीकृत माओवादीका प्रतिनिधि रञ्जीत पटेल, नेपाली काङ्ग्ेरस बाराका जयचन्द चौरसिया, एमालेका देवनारायण चौधरी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका मुक्ति यादवलगायत १८ जना पार्टी प्रतिनिधिहरूले घटनाको तुरुन्त छानबिन गर्नको लागि माग गरेका छन्। बाराका स्थानीय विकास अधिकारी बिन्दुप्रसाद गुरागाईंले जयसवालले गैरकानुनी गतिविधि गरेकाले त्यसको कानुनी उपचार हुनुपर्ने बताए। इन्जिनियर जयसवाल जहिले पनि आफ्नो मान्छे लगाएर जिविसका जिम्मेवार क
मिडिया कपका लागि नाम दर्ता
विजय राई, धनकुटा, १३ मङ्सिर/ धनकुटामा पहिलोपटक मङ्सिर दोस्रो सातादेखि सञ्चालन हुन गइरहेको मिडिया कपका लागि आजदेखि टिम दर्ता सुरु भएको छ। मिडिया हाउसका साथै विभिन्न स्थानीय तथा केन्द्रीयस्तरका पत्रपत्रिकाहरूमा कार्यरत पत्रकारहरूको टिमबीच हुने मिडिया कपका लागि आज ४ टिमले नाम दर्ता गराएका छन्। मिडिया कप मङ्सिर १५, १६, १७ र १८ गते गर्ने निर्णय गरिएको सचिव विनोद घिमिरेले बताए। पत्रकारिताको माध्यमबाट खेलकुद क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्यले धनकुटामा पहिलोपटक आयोजना गरिएको मिडिया कपका लागि धनकुटाका विभिन्न सञ्चार गृह र पत्रकारहरू गरी जम्मा ६ टिमले भाग लिने जानकारी गराइएको छ।
श्रीमान् सम्पादकज्यू, म कक्षा नौमा पढिरहेको बेलादेखि नै प्रतीक दैनिक किनेर पढिरहेको छु। म अहिले ं२ मा पढिरहेको छु। वीरगंजमा धेरै पत्रपत्रिकाहरू प्रकाशित हुँदै आइरहेका छन् तब पनि म प्रतीक दैनिक नै पढ्न रुचाउँछु । किनकि यसमा स्थानीय समाचारहरू बढीभन्दा बढी प्रकाशित हुन्छ भने केही देश, विदेशका समाचारहरू पनि हुन्छन्। यसकाअलावा कथा, कविता, काव्य, चुटकिला, राशिफल पढ्न पाइन्छ । यी सबै किसिमका समाचारहरू पढी देश, विदेश, गाउँघर एवं समाजका बारेमा जानकारी प्राप्त हुने गर्छ। तर एक/दुई महिनादेखि स्थानीय समाचारभन्दा देशविदेशको समाचार बढी प्रकाशित भइरहेको छ, आखिर कुन कारणले गर्दा स्थानीय समाचारको कमी भएको हो। जबकि गाउँघरमा विभिन्न किसिमका घटनाहरू घटिरहेका छन् तर पनि थाहा हुन सकिरहेको छैन। प्रतीकमा अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादवको कानुनी सल्लाह, अनन्तकुमार लाल दास, सञ्जय साह र विभिन्न व्यक्तिहरूका विचार पढ्दा कानुन, शिक्षा र विभिन्न किसिमका ज्ञान हासिल हुने गर्दछ। उहाँहरूलाई मेरोतर्फबाट धन्यवाद छ। तर प्रतीक दैनिकको सम्पादकज्यूलाई मेरोतर्फबाट के अनुरोध छ कि स्थानीय समाचारहरू बढीभन्दा
दोषजति अरूलाई किन ?- बिम्मी शर्मा
हामी सबैको बानी परिसकेको छ, सबै दोष अर्काको टाउकोमा थुपारेर पानीमाथिको ओभानो बन्ने ? नेतादेखि जनता सबै यही गरिरहेका छन्। यही मेसोमा वीरगंजबाट पलायन भएका वा गरिएका महिला पत्रकारहरूको खोजबिन भइरहेको छ। अहिले महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने श्राद्ध चलिरहेको बेलामा यी महिला पत्रकारहरूलाई पिण्ड खानका लागि सम्झिएको होला ? विगत ७ वर्षदेखि म पनि वीरगंजमैं कार्यरत रहेको हुँदा यहाँ महिला पत्रकार ३० जनाको हाराहारीमा त कहिले थिएनन् । मेरो आँखा सानो भएर हो कि मैले नदेखेको ? जेहोस् महिला पत्रकार केही निजी कारणले, केही राम्रो अवसरको खोजीमा तथा केही यो पेशाबाट आफ्नो आर्थिक समस्या समाधान नहुने देखेर पलायन भएका छन्। त्यो त अरू पेशा र राम्रो अवसरमा पाएपछि महिला र पुरुष दुवै हाम फाल्दछन्। नपत्याए बैंकिङ क्षेत्रमा हेर्नुस् एक वर्षअघि एउटा बैंकमा देखिएको कर्मचारी एक वर्षपछि अन्य बैंकमा देखिन्छन्। वर्ष दिनअघि नेपाली सेनाका पूर्वप्रधानसेनापति रूक्माङगत कटवालले पत्रकार सम्मेलनमा महिला पत्रकारहरू नदेखेर यही प्रश्न गरेका थिए। त्यो बेला मैले भनेको थिएँ– पत्रकारिता मोडलिङ र फेशन जस्तै ग्ल्यामर्स क्षेत्र भइसक
बिप्पा र बाबुरामजी -विनोद गुप्ता
डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि भारतसँग बिप्पासमेत गरी दोहोरो कर नलाग्ने अहिले भएको सम्झौतासमेत गरेर दुईवटा महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू भएका छन्। इतिहास सम्भिँmदा २०५२ सालमा शेरबहादुर देउवा मन्त्रिमण्डललाई डा. भट्टराईले नै बुझाउनुभएको ४० बुँदे ज्ञापनपत्रमा भारतीय लगानी रोक्नुपर्छ भन्ने उल्लेख रहेको थियो। यस कुरालाई डा. भट्टराईले पनि सम्झनु हुँदो हो। तर उहाँको अनुभूतिबारे हामी केही भन्न र सोच्न सक्दैनौं। डा. भट्टराई हिजो कम्युनिस्ट नै हुनुहुन्थ्यो तर के आज हुनुहुन्न ? उहाँ आज पनि कम्युनिस्ट नै हुनुहुन्छ। तर १२ बुँदे समझदारीमा आउँदा माओवादीलाई भारतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय दबाब थेग्न गार्‍हो पर्ने अवस्था भइसकेको थियो। त्यसबेला सेनाले नै यो राजनीतिक समस्या भएकोले सैनिक निकास हुन नसक्ने स्वीकार गरिसकेकोले माओवादीहरूको एकातिर बार्गेनिङ पावर बढेको थियो भने अर्कोतिर भारत र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले माओवादीलाई सम्पूर्ण विजय हासिल गर्नु असम्भव छ भन्ने बोध गराएर सत्तामा सम्मानजनक साझेदार बनाइएको तथ्य अब कसैसँग लुकेको छैन। वर्तमान अवस्थामा माओवादीहरूमा खास गरेर पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डजीले भा
व्यवस्थापिका–संसद् ले कानुन बनाएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन कार्यपालिकाले गर्ने हो। कानुन कार्यान्वयनको तरिका वा काइदा ठीक छ कि छैन अर्थात् कानुन उल्लङ्घन भए नभएको खुट्याउने र कानुनको व्याख्या गर्ने अभिभारा न्यायपालिकाको हो। यी तीनै पक्षको कामलाई नियाल्ने वाच डकको भूमिका सञ्चारले गर्नुपर्छ । चारैवटा पक्षमध्ये कुनै एक पक्षले आफ्नो जिम्मेवारी निभाउन सकेन भने कानुन कार्यान्वयन हुन सक्दैन। कानुन कार्यान्वयन हुन सकेन भने त्यो खोस्टो कागज बराबर हुनेछ। कानुन कार्यान्वयनका लागि लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा कार्यपालिकाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नियम कानुनसम्बन्धी जानकारी सुसूचित तथा जनतामा सचेतना फैलाउन सके मात्र कार्यान्वयन सहज हुन्छ। जनसमुदायमा चेतना प्रवाहबिना नै जबर्जस्ती कानुन लाद्न खोजियो भने त्यहाँ विद्रोह हुन सक्छ। मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण, उत्पादन तथा नियन्त्रणको उद्देश्यले ल्याएको कानुन कार्यान्वयन हुन नसकेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगंजका प्रमुखले बताएका छन्। कानुनमा मदिराजन्य पदार्थ बिक्रीका लागि निर्धारित स्थानहरूका अलावा स्कूल, मठ, मन्दिर, मस्जिद, देवालय तथ
जनशक्तिको अभावमा कानुन लागू गर्न गार्‍हो
प्रस, वीरगंज, १२ मङ्सिर/ आन्तरिक राजस्व कार्यालय, वीरगंजले मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको स्वीकारेको छ। आन्तरिक राजस्व कार्यालय, वीरगंजका प्रमुख उत्तमकुमार खत्रीले मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीमा कानुनमा निर्दिष्ट कुराहरूलाई कडाइका साथ वीरगंज शहरलगायत जिल्लामा लागू गर्न नसकिएको कारण केही टीका–टिप्पणीहरू हुने गरेको स्वीकारेका छन् । उनले आवश्यक जनशक्तिको अभावमा कानुन लागू गर्न नसकिएको बताए। कानुनमा मदिराजन्य बिक्रीको लागि निर्धारित स्थानहरूका अलावा स्कूल, मठ, मन्दिर, मस्जिदको ५ सय मिटर दूरीमा बिक्री वितरण निषेध गरिए पनि अहिले वीरगंज क्षेत्रमा यसको अनुगमन नगरिंदा सर्वत्र नियमको उल्लङ्घन भइरहेको पाइन्छ। गीता मन्दिरदेखि गहवामाई मन्दिरसम्मको क्षेत्रलाई मन्दिरमार्ग भनी नामाकरण गरिए पनि सो स्थलमा एक दर्जनको हाराहारीमा मदिरालय र रेस्टुरेन्टहरू पाइन्छन्। त्यस्तै बिर्ता, अलखियामठ, माईस्थान, श्रीपुरलगायतका स्थानहरूमा रहेको स्कूल क्षेत्रको परिसरमैं खुलेआम मदिरा बिक्री भइरहेको सबैले देख्न सक्छन्। यसरी बिक्रीको लागि इजाजत दिने निकाय पनि
नेक्स्पो–२०११ मा ८ करोडको व्यापार लक्ष्य
प्रस, वीरगंज, १२ मङ्सिर/ वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घले उद्योग, व्यापार, पर्यटन, सेवा, प्रविधि र कृषिसम्बन्धी बृहत् मेला तथा प्रदर्शनीको आयोजना गर्ने बताएको छ। सङ्घमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेक्स्पो–२०११ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलाको आयोजना वीरगंजमा गरिने बताइयो। वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घले आयोजना गर्ने मेला तथा प्रदर्शनीमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महाङ्घ, नेपाल सरकार, उद्योग मन्त्रालय, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास बोर्डसमेत आयोजक रहने र मेलामा करिब ८ करोडको व्यापार हुने वीउवासङ्घले दाबी गरेको छ। सङ्घका अध्यक्ष अशोक टेमानीले वीरगंजको आदर्शनगर रङगशालामा पुस ८ देखि १७ गतेसम्म आयोजना गरिने नेक्स्पो–२०११ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलालाई करिब ३ लाखले अवलोकन गर्ने अनुमान गरिएको बताए। उनले उद्योग र व्यापारको प्रवद्र्धनको लागि सङ्घले २०५७ सालदेखि मेलाको आयोजना गर्दै आइरहेको र २०६३ सालमा राष्ट्रियस्तरको उद्योग, व्यापार, पर्यटन, सेवा, प्रविधि र कृषिसम्बन्धी बृहत् मेला नेक्स्पो वीरगंजको सफलतापूर्वक आयोजना गरिसकेको बताउँदै नेक्स्पो–२०११ लाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता
मिडिया कप मङ्सिर १५ देखि १८ गतेसम्म
विजय राई, धनकुटा, १२ मङ्सिर/ धनकुटामा पहिलोपटक सञ्चालन हुन गइरहेको मिडिया कप मङ्सिर १५ देखि १८ गतेसम्म सञ्चालन हुने आज मिडिया कप आयोजक समितिले निर्णय गरेको छ। मिडिया कप धनकुटाका अध्यक्ष विजयसन्तोषी राईको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको बैठकले मिडिया कप मङ्सिर १५, १६, १७ र १८ गते गर्ने निर्णय गरेको सचिव विनोद घिमिरेले बताए। पत्रकारिताको माध्यमबाट खेलकुद क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्यले धनकुटामा पहिलोपटक आयोजना गरेको मिडिया कपका लागि धनकुटाका विभिन्न सञ्चार संस्था, सञ्चार गृह र पत्रकारहरूको गरी जम्मा ६ टिमले भाग लिने जनाइएको छ।
डा. रामावतारप्रसाद खेतान रोबर्ट कोक भन्ने वैज्ञानिकले क्षयरोगको जिवाणु पत्ता नलगाएसम्म मानिसले यसलाई कुनै पापको फल हो भनेर मान्थे। यो रोग :थअयदबअतभचष्गm त्गदभचअगयिकष्क भन्ने जीवाणुबाट हुन्छ भन्ने थाहा पाएको धेरै समयसम्म पनि यसको उपचारको निमित्त चाहिने औषधि पत्ता लागेन र यो रोग लाग्यो भने मर्नुपर्ने आवश्यक थियो। त्यसबेला घर परिवारका अरू सदस्यहरूलाई नसरोस् भनेर चिसो सफा ठाउँमा सेनिटोरियमहरू निर्माण गरी यसका रोगीहरूलाई मृत्यु कुर्न राखिन्थ्यो। स्वतन्त्र भारतका पहिलो प्रधानमन्त्री पं. जवाहरलाल नेहरूकी पत्नी कमला नेहरूलाई क्षयरोग भएपछि ज्यूरिचको सेनिटोरियममा राखियो र उनी त्यही स्वर्गीय भइन्। हाम्रो देशमा पनि बुढानीलकण्ठमा एउटा सेनिटोरियम थियो । वैज्ञानिकहरूको अनुसन्धानबाट क्षयरोगविरुद्धको औषधि पत्ता लाग्यो। आज यो रोग हो भनी ठहर भयो भने डाक्टरको सल्लाह अनुसार औषधि अटुटरूपमा उपयोग गर्‍यो भने यो एकदम निको हुने पक्का छ। लक्षणहरू: दुई हप्ता वा सोभन्दा बढी समयसम्म खोकी लाग्नु, साँझ हलुका ज्वरो आउनु, खाना नरुच्नु, तौल घट्नु, कमजोर हुनु, खकारमा रगत देखिनु, राति पसिना आउनु, छाती दु
लडाकूलाई स्वेच्छिक अवकाश र दीर्घकालीन द्वन्द्व- अधिवक्ता वीरेन्द्र प्रसाद यादव
द्वन्द्वविद् डिडुउ र भानडर भिइटका अनुसार जब एक व्यक्ति वा समूह अर्को व्यक्ति वा समूहबाट नकारात्मकरूपले प्रभावित भएको महसुस गर्दछ तब द्वन्द्वको बिजारोपण हुन्छ। द्वन्द्व उत्पन्न गर्न सक्ने विभिन्न कारणहरू पनि हुन्छन्, जस्तै: मनोगत, व्यक्तिगत, संरचनागत, बाह्य आदि। मानिसको इच्छा र चाहनाबाट निर्देशित महत्त्वाकाङ्क्षाले सृजना गर्ने बेचैनी, आफूसँग अरूको उन्नति र प्रगतिको तुलना गर्दा त्यसले ल्याउने नैराश्यता, मूल्य, मान्यता र विश्वासमा पुगेको चोट, काम गर्ने शैली, बोली, व्यवहार, आचरण, मानसिक तनाव, सूचनालाई ग्रहण गर्ने क्षमता, सूचनाको प्रभाव, सैद्धान्तिक सम्बन्धलगायतका अवस्थाहरूले मनोगत कारणको रूपधारण गरी द्वन्द्व सृजना गर्ने गर्छ। उपरोक्त सिद्धान्त र कारणबाट के देखिन्छ भने मानिसको मनभित्र एक अर्काप्रति रहेको नकारात्मक भावनाको अन्त्य नगरेसम्म द्वन्द्वको सम्भावना पूर्णरूपले अन्त्य हुँदैन। बार्‍ह वर्षको सशस्त्र द्वन्द्वलाई समाप्त पार्ने मार्गमा मुलुक लागिपरेको छ। यसैक्रममा लडाकू र हतियारलाई अलग गरी हतियार राज्यको नियन्त्रणमा राखिंदैछ भने लडाकूहरूलाई सामाजीकरण र समायोजन गरिंदैछ। अधिकांश लडाकू
शिविरमा रहेका माओवादी लडाकू पुनर्वर्गीकरण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सेना समायोजन विशेष समिति अन्तर्गतका लडाकू पुनर्वर्गीकरण टोलीले मङ्सिर ३ गतेबाट सुरु गरेको पुनर्वर्गीकरण प्रक्रिया सोमवार साँझसम्म अन्तिम चरणमा पुग्ने बताएको थियो। पुनर्वर्गीकरणको परिणाम सेना समायोजन विशेष समितिले औपचारिक घोषणा गर्न भने बाँकी नै छ। अनमिनको प्रमाणीकरणबाट १९ हजारको सङ्ख्यामा रहेका लडाकूहरूमध्ये पुनर्वर्गीकरणमा अधिकांशले समायोजन रोजेका छन्। केहीले स्वेच्छिक अवकाश रोजेका छन् भने पुनस्र्थापन रोज्नेहरूको सङ्ख्या शून्य बराबर छ। सातवटा शिविरका लडाकूहरूमध्ये दुईजनाले मात्र पुनस्र्थापन रोजेका छन्। लडाकू पुनर्वर्गीकरण टोलीले शिविरका लडाकूहरूलाई समायोजन, स्वेच्छिक अवकाश र पुनस्र्थापन मध्य एक रोज्न लगाएका थिए। शिविरमा रहेका लडाकूहरूमध्ये ६ हजार ५०० जनालाई मात्र समायोजनमा लाने दलीय सहमति भएको छ। लडाकू, नेपाली सेना र प्रहरीलाई मिलाएर सेनाको मातहतमा रहने गरी एउटा थप महानिर्देशनालय खडा गर्ने दलीय सहमति भएको हो । एमाओवादीले पनि सङगठनभित्रको आन्तरिक सर्वेक्षण अनुसार साढे ६ हजारको सङ्ख्यामा सहमति जनाएको हो। स्व
माओवादी लडाकूको दोस्रो डिभिजनमा पुनर्वर्गीकरण सम्पन्न
यम चौलागाईं, सिन्धुली, ११ मङ्सिर/ सिन्धुलीको दुधौलीस्थित माओवादी लडाकूको दोस्रो डिभिजनमा लडाकू पुनर्वर्गीकरण आज सकिएको छ। दोस्रो डिभिजनमा आजसम्म कुल १ हजार २ सय ९८ जना लडाकूको पुनर्वर्गीकरण गरिएको लडाकू वर्गीकरण टोलीले जनाएको छ। जसमध्ये ८ सय १२ जनाले समायोजन, ४ सय ८४ जनाले स्वेच्छिक अवकाश र २ जनाले पुनस्र्थापना रोजेका छन्। पुनस्र्थापना रोज्नेमा दोस्रो डिभिजनका कृष्णकुमार राई र निर्मल राई रहेका छन्। पुनस्र्थापना रोज्दै दुवैले प्राविधिक सीप सिकेर आफ्नो जीवनयापन गर्ने बताएका छन्। सो स्थानमा अनमिनले प्रमाणित गरेका १६ सय ६० लडाकू रहेकोमा ३ सय ६२ जना पुनर्वर्गीकरण प्रक्रियामा सहभागी नभएको टोलीले जनाएको छ। दुधौली डिभिजनमा खटिएका सेना समायोजन सचिवालयका २४ जना कर्मचारीले नौ दिन लगाएर पुनर्वर्गीकरणको काम सम्पन्न गरेको हो । मङ्सिर ३ गते शनिवारबाट लडाकू वर्गीकरण कार्य सुरु भएको थियो।
महिला सहभागिताबारे नीति नियमको कमी
प्रस, वीरगंज, ११ मङ्सिर/ महिला हिंसाविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय १६ दिने अभियान अन्तर्गत आज दिव्य युवा क्लबले राष्ट्रिय विकास र रणनीति योजनामा महिला सहभागिता बारेमा सुझाव सङकलन गोष्ठीको आयोजना गरेको छ। जिविस पर्साको सभाहलमा आयोजित सो अन्तक्र्रियाका प्रमुख अतिथि निमित्त प्रजिअ चिरञ्जीवी अधिकारीले देश विकासमा महिलालाई सहभागिता गराउने बारेमा नीति नियममा कमीकमजोरी रहेको बताए। उनले लैङिगक विभेदको अन्त्य गर्दै महिला र पुरुष दुवैजना देश विकासमा लाग्नुपर्ने बताए। प्रमुख अतिथिले ग्रामीण क्षेत्रमा अहिले पनि महिला सहभागिता एकदमै न्यून रहेको चर्चा गर्दै सरोकारवाला संस्थाहरूलाई महिला जागरणका लागि ग्रामीण क्षेत्रलाई आधार बनाएर महिला जागरणमा सहभागिता जनाउनका लागि सुझाएका थिए। उनले ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरूमा जागरणको कमीले गर्दा घरेलु हिंसामा वृद्धि भइरहेको पनि बताए । दिव्य युवा क्लबका अध्यक्ष देवनाथ ठाकुरको अध्यक्षतामा सम्पन्न अन्तक्र्रियामा एनजीओसीसीका अध्यक्ष रामनरेश यादव, रेडक्रसका उदयराज शर्मा, जिविसका धर्मराज थापा, राष्ट्रिय महिला अधिकार मञ्चका उपाध्यक्ष कान्तिदेवी, पत्रकार महासङ्घ पर्सा
“लक्ष्य” बेगर सफलता सम्भव छैन
अनन्तकुमार लाल दास के तपाईंलाई थाहा छ, तपाईं कतै जाँदै हुनुहुन्छ ? धेरैजसो विद्यार्थीहरूलाई यस प्रश्नको जवाफ थाहा नै छैन। कसैले भन्लान्, अर्को कक्षामा प्रवेश गर्न त कसैले डाक्टर वा इन्जिनियर बन्न । किनभने कसैले पनि आफूलाई अशिक्षित भनाउन रुचाउँदैन। यसले के प्रमाणित गर्दछ भने उनीहरू सर्टिफिकेट र डिग्री प्राप्त गर्नका लागि विद्यालय र क्याम्पस गइरहेका छन्। मेरो दृष्टिमा यिनीहरू त्यस्ता फूटबल खेलाडी हुन् जो एक कुनाबाट अर्को कुनासम्म बललाई फ्याँकिरहेका छन् तर गोल गरिरहेका छैनन्। धेरैजसो विद्यार्थीहरू आज बल सँगसँगै कुदिरहेका त छन् तर उनीहरूले एउटा गोल पनि गर्न सक्दैनन् किनभने उनीहरूसँग कुनै “लक्ष्य” नै छैन। जसरी भोको मानिसले भोजन र तिर्खा लागेकाले पानी खोज्दछ त्यसैगरी कुनै पनि कार्य गर्न हामी त्यसबेला उत्प्रेरित हुन्छौं, जब हामीसँग त्यो नभएको कुरा थाहा पाउँछौंं । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने इच्छा जागृत भएपछि मात्र त्यसको पूर्तिका लागि हामी प्रयत्न गर्दछौं। केही व्यक्तिहरूले यो “इच्छा” नै “लक्ष्य” हो पनि भन्ने गरेका छन् तर इच्छा र लक्ष्यमा धेरै अन्तर छ। भोकको परिणाम, भोजनको चाहना इच्
माओवादीको कारण अन्योल
सत्तारूढ एनेकपा माओवादीभित्र देखिएको विवादले मुलुकवासीलाई अन्योलमा पारेको छ। एमाओवादीको गुट, फुट र अन्योल मुलुकको अग्रगतिमा बाधक बनेको छ। सैद्धान्तिक विवाद नभएर माओवादीभित्र स्वार्थको विवाद छ। स्वार्थको विवाद सिद्धान्तले समाधान हुन सक्दैन। डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेको मोहन वैद्यपक्षले नै हो। वैद्य र भट्टराई पक्ष एक भएर डा. भट्टराईलाई प्रम बनाउने तयारी गरेपछि एक्लो परेका प्रचण्डले पनि डा. भट्टराईलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन दिएका हुन्। प्रचण्डले पनि डा. भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउन साथ दिने भएपछि वैद्य पक्षधरहरू डा. भट्टराईको पक्षबाट टाढा हुन थाले। आज आएर भट्टराई नेतृत्व सरकारको मुख्य बाधक र चुनौती आफ्नै पार्टीभित्रका वैद्य पक्षधर बनेका छन्। हिजो प्रचण्ड र वैद्य एकतर्फ थिए। डा. भट्टराई एक्लो परेका थिए। त्यतिबेला वैद्यलाई नजिक पार्न प्रचण्डले आफ्नो हेयरस्टाइलसमेत चेन्ज गरेको चर्चा चलेको थियो । त्यसैगरी डा. भट्टराई र वैद्य एक हुँदा प्रचण्ड एक्लो परेका थिए भने आज प्रचण्ड र भट्टराई एक छन्, वैद्य एक्लो परेका छन्। सैद्धान्तिक मदभेद हो भने ३ महिना,
अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव प्रश्न: म ३० वर्षको भएँ। मेरो विवाह भएको ६ वर्ष भयो। करिब चार वर्षदेखि श्रीमती आफ्नो माइतीमा नै बसेकी छन्। प्राय: माइतीमैं बस्न चाहन्छिन्। न त उनी मसँग बसिरहेकी छिन्, न त म अर्को विवाह गर्न सकिरहेको छु। जति प्रयास गरे पनि श्रीमतीसँगै बस्न नआएकीले अब अर्को विवाह गर्नुको विकल्प छैन। म अर्को विवाह गर्न पाउँछु कि पाउँदिनँ। पाउन सकिन्छ भने के कस्तो कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। के सम्बन्धविच्छेद गर्नुपर्छ ? सम्बन्धविच्छेद गर्नलाई मैले के गर्नुपर्छ। –रौटहटका एकजना युवक उत्तर: एउटा श्रीमती छँदै अर्कोसँग विवाह तब मात्र गर्न सकिन्छ जब सम्बन्धविच्छेद हुन्छ वा श्रीमती आफ्नो अंश लिएर अलग बसेकी हुन्छिन्। हाल तपाईंको श्रीमतीसँग सम्बन्धविच्छेद भएको वा तपाईंको श्रीमतीले तपाईंबाट आफनो अंश लिई भिन्दै बसेको कुरा जिज्ञासाबाट देखिंदैन। यस अवस्थामा सम्बन्धविच्छेद नगरी विवाह गर्नुहुँदैन। गरे बहुविवाहको अपराध लाग्छ। तपाईंलाई विवाह गर्नु छ भने पहिला सम्बन्धविच्छेद गर्नुस्। लोग्नेले स्वास्नीबाट सम्बन्धविच्छेद गर्नलाई निर्धारण गरेको कानुनी प्रक्रियाको सहारा लिनु नै उचित छ। लो
सरकारले खासै उपलब्धि हासिल गरेन: जबरा
प्रस, वीरगंज, १० मङ्सिर/ वर्तमान सरकारले शान्तिप्रक्रियामा एक खुडकिलो उक्लनुबाहेक कुनै उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको राप्रपाका अध्यक्ष पशुपति शम्शेर जबराले बताएका छन्। वीरगंजमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष जबराले वर्तमान सरकार शान्तिप्रक्रियाको टुङगो लगाएर संविधान बनाउने गरी गठन भएको भए पनि यसले खासै उपलब्धि हासिल नगरेको बताए। वर्तमान सरकारसँग आमनेपाली जनताले महँगी नियन्त्रण र राहत पाउने आशा राखेकोमा सरकार सो काममा सफल नभएको उनको आरोप थियो । जनतालाई मलखादको सुविधा दिन नसकेको अवस्थामा एकपछि अर्को गरी महँगी बढाउने कार्य भइरहेको र मितव्ययिताको नाममा मुस्ताङ गाडी चढेका प्रधानमन्त्रीले चियापानमा २७ लाख खर्चेर ५० जनाको जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएर मुलुकको ढुकुटी रित्याउने काम मात्र गरेको जबराको आरोप थियो। एकीकृत माओवादी पार्टीले सरकारको नेतृत्व लिएको भए पनि सोही पार्टीको अर्का एकथरीले जग्गा फिर्ता नगर्ने, लडाकू समायोजनमा व्यवधान उत्पन्न गर्ने जस्ता कार्य गरिरहेको चर्चा गर्दै संविधानसभाको म्याद अन्तिमपटक ६ महिनाको लागि थप भएकोमा स्वागत गरेका थिए। उनले राज्यको पुनर्संरचनाका लागि
मुस्लिम इत्तेहाद सङगठनको विस्तारित बैठकमा सदस्यहरूमाथि हातपात
प्रस, वीरगंज, १० मङ्सिर/ मुस्लिम इत्तेहाद सङगठनको विस्तारित बैठकमा आज केही सदस्यहरूमाथि हातपात भएपछि बैठक स्थगित भएको छ। आगामी पुस २ गते वीरगंजमा हुने भनिएको पाँचौं महाधिवेशनको लागि आज वीरगंज–६ रेशमकोठीमा बसेको विस्तारित कमिटीको बैठकमा ६ जना सदस्यहरूलाई निष्कासन गरिएको पत्र बुझाइएपछि विवाद भएको थियो। विवादकै क्रममा केन्द्रीय सदस्य हलिम शाह र पूर्वमहासचिव ताज महम्मदमाथि हातपात भएको थियो। हातपात बढ्दै दोहोरो भिडन्त भएपछि बैठकस्थलमा प्रहरी पुगेको थियो। हातपातको घटनापछि केहीबेरको लागि स्थगित बैठक पुन: बसेको र सो बैठकमा पूर्वगृहराज्यमन्त्री तथा नेपाल मुस्लिम इत्तेहाद सङगठनका उपाध्यक्ष रिजवान अन्सारीले विधिसम्मतरूपमा महाधिवेशन गर्न आग्रह गरे। उनले विधानविपरीत निष्कासन गरिएका भनिएका ६ जनाको कारबाई फुकुवा हुनुपर्ने, देशभरिमा रहेका ४२ जिल्लाका सङगठनको निर्वाचन गरेर महाधिवेशन गरिनुपर्ने माग गरेका थिए । आफ्नो कुरा सकिनासाथ नेपाल मुस्लिम इत्तेहाद सङगठनका अध्यक्ष महमुद आलमले बैठक स्थगित गरेको उपाध्यक्ष अन्सारीले प्रतीकलाई बताए। यसबारेमा अध्यक्ष महमुद आलमले विस्तारित बैठकमा कुनै
एमसी डे–नाइट टि–ट्वान्टी
प्रस, वीरगंज, १० मङ्सिर/ नारायणी क्रिकेट मैदान वीरगंजमा आजदेखि डे–नाइट टि–ट्वान्टी क्रिकेट प्रतियोगिताको शुभारम्भ भएको छ। एमसी ट्रफी डे–नाइट टि–ट्वान्टी क्रिकेटको पर्साका प्रहरी उपरीक्षक रमेश खरेलले आज उद्घाटन गरे। समसुल हवारीको अध्यक्षतामा भएको उद्घाटन सत्रमा बाबुजान अन्सारी, मनिफ अन्सारीलगायतले क्रिकेटको बारेमा मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए। आजबाट शुभारम्भ भएको एमसी ट्रफी डे–नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता २२ गतेसम्म सञ्चालन हुने बताइएको छ। प्रतियोगितामा दैनिक दुईवटा खेलको आयोजना हुनेछ। पर्सा, बारा र छिमेकी भारत, बिहारका गरी प्रतियोगितामा २४ वटा क्रिकेट क्लबको सहभागिता रहेको आयोजकले बताएको छ। कलैया वारियर्स विजयी प्रस, कलैया, १० मङ्सिर/ कलैया क्रिकेट क्लबको आयोजनामा आर्यन्स गाइजको प्रायोजनमा कलैयास्थित सिद्घेश्वर खेल परिसरमा सञ्चालित शहीद असरफ मजिद मेमोरियल नकआउट टी–२० डे–नाइट क्रिकेट प्रतियोगितामा शुक्रवार भएको फाइनल खेलमा कलैया वारियर्स क्रिकेट क्लबले उपाधिमाथि कब्जा जमाएको छ। कलैया वारियर्सले कलैया लायन्स क्रिकेट क्लबलाई ६ विकेटले पराजित गरी उपाधिमाथि कब्जा जमाएको हो। ट
उमाशङकर द्विवेदी एकाबिहानै ढोल मजिराका साथ साजिन्दाहरूलाई लिएर किन्नर नर्तक गृहस्थको ढोकामा पुग्दछ। पुत्र जन्मको खुशीयालीमा सोहर, झुमर रागमा किन्नरले गीत “ए लालना केकरा अङगनवा जमलन लाल, घरवा मे उठे सोहर हो...।” गाउँदै घरमा पुग्दछन्। जुन घरमा पुत्रको जन्म भएको हुन्छ, त्यहाँ किन्नरहरू (खोजवा, खोजइन) निश्चितरूपमा पुगेर गीत गाउँदछन्, नाच्दछन्, बधाई दिन्छन् तथा बक्सिस माग्दछन्। छरछिमेकीका मानिसहरू त्यहाँ रमिता हेर्न झुम्मिएका हुन्छन् । एकैछिनमा त्यहाँ पूर्णरूपमा खुशीयाली तथा आल्हादकारी माहोल सृजना भइसकेको हुन्छ । केही बेरको नाचगानपछि मानर (मादल) पुजाइ हुन्छ। घरका बूढी आइमाईहरूले मानर पुज्दछन् । यसमा गच्छे अनुसार सिधाको चामल, दाल, तरकारी तथा नगद रुपियाँ लाग्दछ। साजिन्दाको मानरलाई पाँच वा सात ठाउँमा घ्यू अथवा तेल लगाएर सो ठाउँमा सिन्दूर लगाइदिन्छन्। फूल, अक्षता लगाइदिएर विधिवत् मानर पुजाइको नेग पूरा हुन्छ। मानर पुजाइपछि पुन: नाचगान सुरु हुन्छ। नवजात शिशुलाई किन्नरले काखमा लिएर नाच्न थाल्दछन्। आफ्नो सुरिलो कण्ठ लहरीले गीतको माध्यमबाट नानाथरीका आशीषको ओइरो लगाउँछन्। घरको मालिक किन्नरलाई बि
–ब्रह्माकुमार सुदीप भट्टराई परापूर्वकालमा एक किसानका जोडी थिए। दुवै सुखदु:ख गर्दै जीवन पाल्दै थिए। दु:खको कारण एउटै थियो सन्तान नहुनु। उमेर छिप्पिदै जाँदै थियो तर पनि सन्तानको सुख उनीहरूले प्राप्त गर्न सकेका थिएनन्। त्यसैले उनीहरूलाई बहुत चिन्तित बनाउँथ्यो। समयको धारसँगै उनीहरूले अनन्य भावले भगवान्को भक्ति गर्दै आफ्नो दु:खेसो भगवान्लाई सुनाउँथे तर पनि सुनवाइ भएको थिएन। अचानक एकदिन एउटा साधु घुम्दै उनीहरूको घरमा भिक्षा माग्न आइपुग्यो। उनीहरूले खुब स्वागत सत्कार गरी साधुको सेवा गरे। साधुले पनि उनीहरूको आतिथ्यबाट खुशी भएर एउटा फल दिंदै भने यसले तिमीहरूको इच्छा पूर्ण हुनेछ। नभन्दै त्यो फल खाएको केही समय बितेपछि उनीहरूलाई पुत्ररत्न प्राप्त भयो। उनीहरूको खुशीको सीमा नै रहेन। बिस्तारै छोरा हुर्किंदै गयो र बाबुको कार्यमा केही सहयोग पनि गर्न थाल्यो। तर ड्रामाको भावी अर्कै थियो एकदिन खेतमा खाना पुर्‍याउन जाँदा लडेर उसको मृत्यु भयो। बूढालाई बहुत सन्ताप भयो। बूढेसकालमा भगवान्को आशीर्वादले प्राप्त भएको एक्लो छोरा त्यो पनि सानैमा बित्यो। यो कुरा कसरी बूढीलाई सुनाऊँ उसलाई यही चिन्ताले सतायो। बूढ
चरा र हात्ती
सङ्कलन तथा अनुवाद उमाशङकर द्विवेदी कुनै वनमा एउटा रूखको हाँगामाथि गुँड बनाएर एउटा चरा दम्पती सुखपूर्वक निवास गर्दथ्यो। समय अनुसार एकदिन पोथी चराले फुल पारेर ओथारो बसी। दोस्रो दिन त्यसै वनमा बस्ने एउटा मदोन्मत हात्ती घामले व्याकुल भई छहारीको खोजीमा आएर त्यसै रूखमुनि उभियो। छहारीमा बसेपछि शीतलता पाएर ख्यालख्यालमैं हात्तीले चरा दम्पतीले गुँड बनाइ बसेको रूखको हाँगालाई आफ्नो सुँढले तानेर भाँची दियो। हाँगा भाँचिदा चराको गुँड नष्ट भयो। चराका फुलहरू भुँइमा बजारिएर छताछुल्ल हुन पुगे। चरा दम्पती भने आयु शेष रहेको कारण उडेर प्राणको रक्षा गर्न सफल भए। आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो सन्ततिहरूको बिनाकारण असमयमा नाश भएको देखेर पोथी चराले शोकाकुल भई विलाप गर्न थाली। उसको करुण विलाप सुनेर उसको परम हितैषी ‘काष्ठकुटु’ नामक कठफोरवा चरा त्यहाँ आएर सान्त्वना दिंदै भन्यो– “हे मित्र, बितेको कुराको शोक बुद्धिमानले गर्नुहुँदैन । अब भविष्यमा के गर्ने हो, त्यस बारेमा विचार गर्नुपर्दछ।” कठफोरवा चराको सान्त्वनाका यस्ता कुराहरू सुनेर चरीले भनी,“मित्र तपाईंले भनेको कुरा ठीक हो, तर मलाई दु:ख के छ भने त्यस हात्तील
हीरा गिरी हुनुको अर्थ
चन्द्रकिशोर ब्रज भाषामा एउटा लोकोक्ति बडो प्रचलित छ, ‘गुन ना हिरान्यो, गुन गाहक हिरानो है’ अर्थात् गुण हराएको छैन वा भनौं लुप्त भएको छैन केवल गुणका पारखीहरू, सम्मानकर्ताहरू कम भएका छन्। हरिप्रसाद गिरी जो स्वयंमा वीरगंजेली उद्योग–व्यवसायको विकासक्रमको एउटा सिङगो इतिहास हुनुहुन्थ्यो। हीरा गिरीका नामले लोकप्रिय उहाँको व्यक्तित्व एवं कार्यलाई नबुझिकन वीरगंज क्षेत्रको आर्थिक राजधानी कहलिने यात्रालाई ठम्याउन सकिंदैन। कसैको भौतिक अनुपस्थितिमा भावुकतावश प्रकट गरिएको टिप्पणी होइन यो लामो समयसम्म उनलाई नजिकबाट नियाल्दा, स्वस्फूर्तरूपमा बाहिरिएको अभिव्यक्ति हो। उनका व्यक्तित्वका कैयौं पक्षहरू अहिले पनि चर्चामा आएका छैनन्। उनको परिवार एउटा साझा संस्कृतिको सङगम थियो, पहाडी र मधेसी। यस सन्दर्भमा हिन्दीमा भन्नुपर्दा, ‘वे साझी तहजीब के नुमाइंदे थे’। उहाँ मारवाडी उद्यमीहरूलाई मूलप्रवाहसँग जोड्ने सेतु पनि थिए। त्यसैले श्रद्धाञ्जलिसभामा उद्योगीहरूले भने, हामीले एउटा अभिभावक गुमाायौं । उद्योग–व्यवसायमा लाग्नेहरू उच्चकोटिका विद्वान हुँदैनन् भन्ने एउटा जनसामान्यमा बुझाइ छ तर उहाँ एक मौन पुस्तक
काल गणना– २ ब्रह्मादेखि वैज्ञानिकसम्म
सुशील मुडभरी गताङकको बाँकी भाग अब हामी अजिवकल्पको बारेमा पूर्वीया मत र पश्चिमा मतको अवधारणा सरसर्ती हेरौं। मोटामोटीरूपमा हेर्‍यौं भने धेरै कुरा फरक देखिन्छ, तर गहिरिएर हेर्ने हो भने दुवैमा मेल खाने विषयवस्तु यथेष्ट भेटिन्छन्। पृथ्वीको आयु सम्बन्धमा पश्चिमाहरूले दुई अर्ब वर्षदेखि साँढे चार अर्बसम्मको व्याख्या गरेका छन्। हाम्रो वैदिक साहित्यले पनि त्यस्तै किसिमबाट गणना गरिसकेको पाइन्छ। संसारको सबैभन्दा पुरानो ग्रन्थ ऋग्वेदको कान्छो भाइ अथर्ववेदको ८।२।२१–१ मा लेखिएको छ:– शतं तेऽयुतं हायनान्द्वे युगे त्रीणि चत्वारी कृष्ण:। अर्थात् ४,३,२ यी अङकभन्दा पछि दस लाख सङ्ख्यालाई सूचित गर्ने शून्य (अर्थात् सातओटा शून्य) थपे पृथ्वीको आयु बन्दछ। यस हिसाबले हेरेको खण्डमा अथर्ववेदको रचना भएको समयमा पृथ्वीको आयुलाई चार अर्ब बत्तीस करोड वर्ष मान्ने प्रचलन भएको देखिन आउँछ । पृथ्वीको यस आयुलाई हिन्दूहरू मानव–वर्ष मान्दछन्। अथर्ववेदको यो भनाइ पश्चिमाहरूको भनाइभन्दा धेरै पहिले आइसकेको हो। भूगर्भवेत्ता विद्वानहरूले भूगर्भभित्र रहेका ढुङगाको प्रकृति अनुसन्धान गर्ने क्रममा जुन चट्टान वा ढुङ
निराशा होइन आशा गरौं– ‘नयाँ नेपाल पक्कै बन्छ’- बैद्यनाथ ठाकुर
यतिखेर आमजनतामा मात्र होइन स्वयं राजनीतिक पार्टीहरूका नेता तथा कार्यकर्ताहरूमा समेत चरम निराशा र कुण्ठा उत्पन्न भएको सर्वत्र सजिलै सबैले अनुभव गरिरहेका छन्। प्रत्येक पार्टीका चाहे त्यो संसद्वादी होऊन् वा गैरसंसद्वादी तिनीहरूको तलदेखि माथिसम्म नेतृत्वको जिम्मेवार हिस्सा भ्रष्टाचारमा लिप्त देखिन्छ। भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति कमाउनकै लागि संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् चारवटा सरकार बनिसकेको छ। कुर्सीको भागबन्डा र छिनाझप्टीको फोहरी खेल यति विघ्न घिनलाग्दो अवस्थामा पुगिसकेको छ कि कुर्सी पाउनकै लागि आफूद्वारा स्वयं घोषित लक्ष्य, आदर्श तथा सपनाहरू तिनीहरूले रातारात बेच्ने गरेका छन् । पार्टी फुट्नु, चोइटिनु, गठन हुनु तथा अनेकखाले गुट, उपगुटमा विभाजित हुनुको पछाडि अहिले कुनै महान् लक्ष्य कारक तत्त्वको रूपमा राजनीतिक रङगमञ्चमा देखिंदैन बरू फगत कुर्सी पाउन तथा भ्रष्टाचार गरी पद र खोक्रो बुर्जुवा प्रतिष्ठाको लालचमा हाम्रा आदरणीय नेताहरूले रातारात पार्टी फुटाउने गरेका तथ्य जगजाहेर नै छ। हिजोको दिनमा गरिएको त्याग तथा बलिदानको मूल्य कुर्सीसँग साट्न नेताहरू तयार भएकै कारण पार्टीहरूभित्र अनेक गुटले
गाँजा बरामद भएको तथा गाँजासहित मानिस पक्राउ परेका समाचारहरू स्थानीय पत्रपत्रिकाहरूमा आज भोलि दिनहुँ आउने गरेका छन्। पर्सा जिल्लामा हाल कार्यरत प्रहरी उपरीक्षक रमेश खरेलले कार्यभार सम्हालेपछि आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा आफ्नो कार्यकालमा पर्साबाट गाँजा उल्मूलन गर्ने घोषणा गरेका थिए। खरेलभन्दा अघिल्लो प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्रमान श्रेष्ठको पालोमा नियन्त्रणमा आएको गाँजाखेती खरेलको समयमा पुनरावृत्ति हुन्छ र नियन्त्रण हुन सक्दैन भन्ने टीका–टिप्पणीहरू पनि नभएका होइनन्। ती टीका–टिप्पणीहरूलाई गलत साबित गर्दै प्रउ खरेलले अभियानलाई अझ अगाडि बढाउन सफल भएका छन्। गाँजाको ओसारपसार तथा कारोबार धेरै नियन्त्रणमा आएको छ। ग्रामीण क्षेत्रका कृषकहरूले पनि प्रहरीको गाँजा उल्मूलन अभियानलाई साथ दिएका छन्। कतिपय गाउँ, टोल, बस्तीहरूमा स्थानीय कृषकहरूले आफ्नो गाँजा आफैंले नष्ट गर्ने कार्य गरिरहेका छन् भने प्रहरीहरूको छापामारीमा पनि प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा स्थानीयको सहयोग र समर्थन प्राप्त छ। केही वर्ष पहिलेसम्म प्रहरी र स्थानीय प्रशासनका व्यक्तिहरू आफैं गाउँ टोलमा पुगेर कृषकहरूलाई गाँजाखेती गर्न सुझ
हत्या अभियोगमा फरार तेली समाजका अध्यक्ष राजेश्वर साह तेली ६ महिनापछि पक्राउ
प्रस, वीरगंज, ८ मङ्सिर/ कलवार कल्याणकारी समिति वीरगंजका अध्यक्ष भोलाप्रसाद कलवार हातहतियार तथा खरखजानामा पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएको दुई साता पनि बित्न नपाउँदै आज जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले तेली समाज नेपालका अध्यक्ष राजेश्वर साह तेलीलाई हत्याको अभियोगमा पक्राउ गरेको छ। विगत ६ महिनादेखि फरार अभियुक्त तेलीलाई आज जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको टोलीले निजको वीरगंज–१३ स्थित कार्यालयबाट पक्राउ गरेको हो। तेलीको पुस्तैनी घर पर्सा जिल्ला गम्हरियामा गत असार १३ गते घटित शहीद देवानको हत्यामा संलग्न रहेको भनी निज साहलाई उनीविरुद्धको किटानी जाहेरीका आधारमा फरार अभियुक्तको रूपमा आज पक्राउ गरिएको हो। एमालेका कार्यकर्ता रहेका शहीद देवानको तेली समाज नेपालका अध्यक्ष राजेश्वर साह तेलीको निर्देशनमा हत्या गरिएको भनी पीडित परिवारले तेलीसहित चारजनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएको थियो। किटानी जाहेरी परेकामध्ये एकजना पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन् भने राजेश्वर साह तेलीलगायतका तीनजना फरार थिए। आज प्रहरीले छापामारी गर्दा निजका दाजु रामेश्वर साह तेलीलाई पनि पक्राउ गरेको छ। तर सो हत्यामा रामेश्वर साहको संलग्न
८ क्वीन्टल गाँजासहित पाँचजना पक्राउ
प्रस, वीरगंज, ८ मङ्सिर/ जनपद प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त गस्ती टोलीले पर्सा जिल्लाको धोरे गाविस वडा नं. २ र ८ मा गएराति छापा मारी ८ क्वीन्टल गाँजासहित २ नेपाली र ४ भारतीय नागरिक गरी ५ जनालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सो परिमाणको गाँजासहित पाँचजनालाई पक्राउ गरेको जनाएको छ। प्रहरीले धोरे गाविसको वडा नं. २ बस्ने रामकिशोर कोइरीको घरबाट १५० किलो गाँजा र वडा नं. ८ बस्ने जोखु महतोको घरबाट ६५० किलो गरी ८ सय किलो गाँजासहित जोखु महतो, हीरा महतो, भारत बिहार राज्यको बेतिया नौतन मङगलपुर निवासी रामचन्द्र सिंह, वीरेन्द्र यादव र जोगिन्द्र सिंहलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा, सशस्त्र बेस सबैठवा र अमरपट्टीको संयुक्त टोलीले जिप्रका पर्साको सूचनाका आधारमा सो स्थानमा छापामारी गरेको बताइएको छ । पक्राउ परेको गाँजा र पक्राउ परेकाविरुद्ध कानूनी कारबाई अगाडि बढाएको पर्सा प्रहरीले जानकारी गराएको छ।